China ndokugadzira Stainless Steel pena fekitari uye vagadziri | Feng Erda
Yakagadzirwa isina simbi pfuti yakagadzirwa neUSUS200, 300, 400 dzakateedzana simbi isina waya uye pasi kuita mabhora eakasiyana roundness.Stainless simbi kupfura ine yakanaka kupisa kuramba, ngura kuramba, glossy surface.It inogona kutora akakwana kushanda kune Stainless simbi workpieces, Kukanda kwakajeka uye zvigadzirwa zvinoda yakakwira yepamusoro mhando.size inotangira pa0.20mm kusvika 2.50mm.
Glossy isina ngura pamusoro, yakatenderera bead chimiro
Nyaya yezvehupfumi yekushandisa isina waya yekucheka waya kupfura mukucheresa uye nekupwanya mashandiro ekuchenesa zviri nyore kugadzira. Wacheka waya haina kutsemuka kana kupaza panguva yekushandisa nekuti chidimbu chakasimba. Nekuda kweizvozvo, iwe unowana izvi zvakanaka.
300 dzakatevedzana Stainless simbi pena nenyunje kunobatsira chaizvo kuti pemvura kurapwa yealuminium castings, pamwe neyakajeka michini, kunyanya turbocharger.
200 ne400 dzakateedzana Stainless simbi kupfura yekugadzirira aluminium yekubvisa pendi uye pane aluminium die castings yekuparadza uye kupedzisa.
Pashure: Zinc kupfura / Zinc kucheka waya kupfura
Zvadaro: Barium-Silicon (BaSi)